တာဟူး ဂိုရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်ဒိုနီးရှား တာဟူး ဂိုရင်းနှင့် ကြက်ဥလိပ်ကို ပန်းကန်ပြားတစ်ခု၌ တည့်င်းထားပြီး ပဲပင်ပေါက်၊ သခွားသီးနှင့် မုန်လာဥနီတို့ ဖြူးထားပုံ
Tauhu goreng (မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူစကားလုံးပေါင်း)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ
Cookbook: တာဟူး ဂိုရင်း Media: တာဟူး ဂိုရင်း
တာဟူး အီဆီ(တို့ဟူးအဆာသွပ်)အား bird's eye chili နှင့် တည့်ခင်းထားပုံ
တာဟူး ဂိုရင်းသည် အင်ဒိုနီးရှား အစားအစာ၊ မလေးရှားအစားအစာနှင့် စင်ကာပူအစားအစာမှ မည်သို့သော တို့ဟူးကြော်အမျိုးအစားကိုမဆို ခေါ်သော ယေဘုယျအမည်ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကြော်နေသော တို့ဟူးအား တွေ့ရပုံ
ချက်ပြုတ်ပုံမှာ တို့ဟူးအား ရွှေညိုရောင်သန်းလာသည်အထိ အကျတ်ကြော်ခြင်းဖြစ်သည်။ အများစုတည့်ခင်းသည့်ပုံစံမှာ ကြော်ထားသော တို့ဟူးအား ကန့်လန့်ဖြတ်တစ်ဝက်စီလှီးဖြတ်၍ ပန်းကန်ပြားတွင် ပဲပင်ပေါက်၊ သခွားသီးနှင့် ကြက်သွန်မိတ်တို့ ဖြူး၍ ပြင်ဆင်သည်။ ဆော့စ်မှာ ကြက်သွန်မိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးတောင့်၊ ငါးပိ၊ ပဲငံပြာရည်နှင့် မန်ကျည်းသီးနှစ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဆော့အပြစ်ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးဘာသာတွင် တာဟူးမှာ 'တို့ဟူး'နှင့် ဂိုရင်းမှာ 'အကြော်'ကို ရည်ညွှန်းသည်။ တို့ဟူး၏ မူလအစမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှဒေသသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချလာသော တရုတ်လူမျိုးများမှ ယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာရှယဉ်ကျေးမှုတွင် တို့ဟူးကြော်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ စားသုံးခြင်း ရှိပြီး အနောက်တိုင်းအသီးအရွက်စားသမားများ၏ အဓိကဟင်းအဖြစ်လည်း တွေ့ရသည်။
အရံဟင်းများနှင့် တန်ဆာဆင်မွမ်းမံမှုတို့မပါပဲ ထမင်းဖြူပေါ်မှ 'တာဟူး ဂိုရင်း'ကြီးသပ်သပ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တာဟူး ဂိုရင်းအား အကြွပ်ကြော်(Deep fried)နှင့် အကျတ်ကြော်(Mildly fried)၊ ဆီ သို့မဟုတ် ထောပတ်ဖြင့်ကြော်ခြင်းဟူ၍ တွေ့နိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တာဟူး ဂိုရင်းအား ဆမ်ဘဲတွင် ကဲဂျပ် မန်နစ်(ပဲငံပြာရည်အချို)ထည့်ထားသည့် ဆမ်ဘဲ ကဲဂျပ်ကို ငရုတ်သီးတောင့်နှင့် ကြက်သွန်မြိတ်တို့ လှီးထားသည်တို့ထည့်ပြီး သုံးဆောင်သည်။ အချို့သော ပုံစံကွဲများတွင် ငရုတ်သီးအစား မြေပဲဆော့ကို အသုံးပြုသည်။ အချို့သော ပုံစံကွဲများမှာ-
တာဟူး အီဆီ(lit. 'တို့ဟူး အဆာသွပ်') - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လူသိများသော တာဟူး ဂိုရင်း၏ ပုံစံကွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တို့ဟူးတွင် ပဲပင်ပေါက်၊ မုန်လာဥနီးနှင့် တခါတရံတွင် အသားနုပ်နုပ်စင်းတို့ဖြင့် အဆာသွပ်ပြီး ထောပတ်ဆီထဲတွင် ရဲကျတ်နေအောင် ကြော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအစားအစာကို ဂိုရင်ဂန်(အင်ဒိုနီးရှား လမ်းဘေးအကြော်ဆိုင်)များတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကို ဂျာဘိုင် ရာဝိ(bird's eye chili)နှင့် တွဲဖက်စားသုံးသည်။
တာဟူး ဆူမဲ့ဒန်း - ဤအမည်မှာ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ်၊ ဆူမဲ့ဒန်းမြို့အား အစွဲပြုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆူမီဒန်းမြို့ရှိ တရုတ်ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများမှစ၍ တာဟူး ဘွန်ကန် တို့ဟူးဆိုင်အား စွန့်ဦးဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တာဟူး ဂီဂျဲရော့ - တို့ဟူးကြော်ကို အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ်၊ ချီရီဘွန်းမြို့မှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ချိုစပ်အရသာ ငရုတ်ဆော့ကျဲကို ကြက်သွန်မိတ်နှင့် ငရုတ်သီးတောင့်တို့ ထည့်၍ စားသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
တာဟူး တိုဂီ - တို့ဟူးတုံးများကို ပဲပင်ပေါက်နှင့် မွှေကြော်ခြင်းဖြစ်သည်။
တာဟူး ဂျန်ပေါ(lit. 'တို့ဟူး အရော') - တို့ဟူးကြော်အား အမဲသားတုံး၊ အသီးအရွက်၊ ပဲပင်ပေါက်နှင့် ခေါက်ဆွဲ သို့မဟုတ် ဆန်ကြာဇံဖြင့် ရော၍ အသားပြုတ်ရည်ကြည်တွင် ထည့်၍ သုံးဆောင်သော အစားအစာဖြစ်သည်။ ဤဟင်းသည် အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်၏ မြို့များဖြစ်သော မာလန်းမြို့၊ ဆူရဘာယာမြို့နှင့် လာမွန်ဂန်မြို့တို့တွင် လူသိများသော ဟင်းလျာတစ်ခုဖြစ်သည်။
တာဟူး ဂူတင်(lit. 'ကတ်ကြေးဖြင့်ညှပ်ထားသော တို့ဟူး') - တို့ဟူးကြော်အား ချို၍ စပ်သော မြေပဲဆော့အပစ်တွင် ထည့်၍ ပြင်ဆင်သော ဟင်းလျာဖြစ်ပြီး အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်၊ ဆူရဘူယာမြို့မှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ဟင်းလျာဖြစ်သည်။
တာဟူး တဲလုရ်(lit. 'ကြက်ဥနှင့် တို့ဟူး') - တို့ဟူးကြော်အား ကြက်ဥလိပ်၊ ပဲပင်ပေါက်၊ မြေပဲ၊ လွန်တောင်းဆန်ကိတ်နှင့်အတူ ချိုချဉ်သော ပဲငံပြာရည်ဆော့အရည်ကျဲဖြင့် တည့်ခင်းသည်။ ဤဟင်းသည်လည်း အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်၊ ဆာရဘာယာမြို့မှ အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တာဟူး ဘူလတ်(lit. 'တို့ဟူးလုံး') - တာဆီမာလာယမြို့မှပြုလုပ်သော တို့ဟူးကြော်ပုံစံသစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တို့ဟူးကို အမွှေးအကြိုင်တို့ဖြင့်ရော၍ လုံးပြီးနောက် ဟင်းချက်ဆီတွင် ရဲနေအောင် ကြော်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုပတ် တာဟူး(lit. 'ကဲတုပတ်နှင့် တို့ဟူး') - တို့ဟူးကြော်အား ကဲတုပတ် ဆန်ကိတ်၊ ပဲပင်ပေါက်နှင့်ရောကာ အချို၍ စပ်သော မြေပဲဆော့အပစ်ဖြင့် တည့်ခင်းပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျာဗားကျွန်းတွင် လူသိများသော ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အပြင် ကူနင်ဂန်၊ မဂဲလန်၊ ဆိုလိုနှင့် ဆာရဘူယာဒေသများမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် အကျော်ကြားဆုံးသော ပုံစံကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
↑ Sejarah tahu goreng။ (Indonesian)
↑ Indah Morgan။ Indonesian stuffed tofu (tahu isi)။ SBS Australia။
↑ Tahu Bunkeng the pioneer of Tahu Sumedang
Indonesian stuffed tofu (tahu isi) recipe from SBS Australia
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တာဟူး_ဂိုရင်း&oldid=672625" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။